Agaasinka Guud ee Diiwaan Gelinta Dhulka iyo Cadastre si Shaqaale Qandaraas Lagu Siiyo | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaAgaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre si Loogu Kunturo Shaqaalaha
03 / 01 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
agaasime guud ee diiwaangelinta dhulka iyo cadastre
Agaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre ayaa shaaca ka qaaday in 657 shaqaale ah la shaqaaleysiin doono iyadoo la raacayo Sharciga Lambar 125 ee Shaqaalaha Rayidka ah ee laga shaqaaleysiin doono waaxyada adeegga gobollada. Murashaxiinta KPSS (B) dhibco ayaa la gelin doonaa darajooyinka waxaana lagu sameyn doonaa imtixaanka qoraalka ah ee la sameyn doono si loo iibsado.
Ku dhawaaqida ay sameysay Agaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre: Genel Agaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre waa laga shaqaysan doonaa waaxyada adeegga gobollada waxaana loo shaqeynayaa si waafaqsan Qodobka 125 (B) ee Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah oo lambarkiisu yahay 4 ilaa booska 06 Qandaraaslaha Diiwaan Gelinta Khubarada ku qeexan liiska iyo lifaaqa gobolka. Marka laga hadlayo Shaqada Shaqaalaha Qandaraasyada lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee ku taariikhaysan 06/1978/7 laguna tiriyey 15754 kuna lifaaqan Go'aanka Golaha Wasiirrada ee taariikhdu markay ahayd 28/6/1978 kuna tirin 16330/XNUMX in lagu daboolo miisaaniyadda caasimada.
Sida ku xusan sadarka (c) ee sadarka koowaad ee Qodobka 2aad ee Lifaaqa 4-aad ee Mabaadiida, shaqaalaha qandaraasleyda ah waxaa lagu qaadayaa iyada oo lagu saleynayo natiijada natiijada qoraalka ah ee u dhexeysa musharraxiinta in loogu yeeri doono ilaa XNUMX (afar) jeer tirada tirada boosaska la soo iibin doono haddii kooxda KPSS (B) lagu meeleeyo nidaamka dhibcaha puan.
SHURUUDAHA: 1-Shuruudaha ay dalbadayaashu ka soo bixi doonaan qaarkood waa kuwan soo socda: amak Iyadoo aan laga hor imaanaynin qodobka Qodobka 657aad ee Sharciga no.
2-Xitaa haddii muddooyinka ku xusan qodobka 53aad ee Xeerka Ciqaabta Turkiga ay dhaafeen; dembiyada ka dhanka ah amniga gobolka, dembiyo ka dhan ah dastuurka dastuuriga ah iyo shaqadiisa, dambiyada ka dhanka ah difaaca qaranka, dambiyada ka dhanka ah sirta dowlada iyo basaasida, lunsashada, laaluushka, laaluushka, xitaa hadii lagu xukumay hal sano ama in ka badan danbi kas ah ama cafis. , xatooyo, musuqmaasuq, been abuur, ku xadgudbid aaminaad, kharidad musuqmaasuq, ku tagrifalka hindisada, waxqabadka ficilka, soo bandhigida qiyamka hantida ka dhalatay dambiga ama aan lagu xukumin dambiyada tahriibinta.
3-Musharaxiinta labka ah wax shaqo ah kuma lahan howlaha militariga.
KPSS waa inay ahaataa ugu yaraan 60:Dhanka kale, murashaxiinta waxaa looga baahan yahay inay wataan shuruudo gaar ah. Shuruudaha gaarka ah waa sidan soo socota: Maamulka Macluumaadka iyo Diiwaangelinta Dukumiintiyada, Diiwaangelinta iyo Macluumaadka, Kaydinta, Laybareeriga, ama Ottoman Paleography, koorsooyinka Carabiga iyo Beershiyiinta ee xarumaha waxbarashada sare. (Murashaxiinta u qalma in la magacaabo waxaa laga codsanayaa inay sameeyaan qoraal caddeyn ah oo muujinaya inay arkeen mid ka mid ah koorsooyinka Ottoman Paleography, Carabiga ama Faaris.)
2016 KPSS (B) koox KPSS-P3 dhibco nooca 60 (lixdan) ama in kabadan
Goobta iyo Waqtiyada Codsiyada: Diiwaanka Dhulka iyo Gobolka Cadastre ee Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakir, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazig, Eskisehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Sanliurfa iyo Yozgat 06 Qandaraasle Shaqaale (13 / B) Foom Codsi Codsi ah ”oo laga heli doono websaydhka Agaasinka Guud (www.tkgm.gov.tr) inta u dhaxaysa 2018-4 Abriil XNUMX illaa dhammaadka saacadaha shaqada iyo dukumiintiyada ku qeexan foomkan ayaa la soo gudbin doonaa shaqsi ahaan ayaa loo qaban doonaa.
Haddii in ka badan hal Agaasime Gobol laga dhigo, dhammaan codsiyada waxaa loo qaadanayaa inay yihiin kuwo aan shaqeyn oo xitaa haddii musharraxa la magacaabo, ballamaha waa la burin doonaa.
Agaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre